ဒေါက်တာ ဇော်လင်းထွဋ် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၉ ကိုယ်စားပြု၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဒေါက်တာ ဇော်ဝင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၏ လူမှုရေးဝန်ကြီးအဖြစ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရာတော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ ကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ခံရသူ ဖြစ်သည်။
ဇွန်မိုးအောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဘောလုံးကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဘယ်တောင်ပံနေရာမှ မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းနှင့် ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းတို့တွင် ကစားလျက်ရှိသည်။ သူသည် ရန်ကုန်မြို့ဇာတိဖြစ်သည်။
ဇွန်သံစဉ် သည် မြန်မာမော်ဒယ်၊ ဂီတပညာရှင်နှင့်သရဖူရရှိခဲ့သူ အလှမယ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Miss Universe Myanmar 2017 ပြိုင်ပွဲတွင် သရဖူရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ်အဖြစ် Miss Universe 2017 ပြိုင်ပွဲအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် မန္တလေး၌ မွေးသည်။ အမည်ရင်းမှာ ဇာနည်မောင်မောင် ဖြစ်သည်။ မောင်နှမ ၅ ယောက်အနက် အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။ အခြေခံပညာကို အထက၁၁ ၌ တက်ပြီး ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေပညာ သင်ယူနေသည်။
သရေစည်သူ ဦးဉာဏ်ထွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယ သမ္မတ တစ်ဦးအဖြစ် ၂၀၁၂ ဩဂုတ်မှ ၂၀၁၆ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး နုတ်ထွက်သွားပြီးနောက် လစ်လပ်လျှက်ရှိသည့် ဒုသမ္မတနေရာကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရေတပ်ဦး ...
ဦးဉာဏ်ဝင်း သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဇီးကုန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ...
ဦးဉာဏ်ဝင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေဖြစ်သည်။ ဦးဉာဏ်ဝင်းသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် ပါတီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ပါတီ၏ ဥပေဒေရေးရာ အကြံ ...
ဒေါက်တာညိုညိုအား ၁၉၅၂-ခု၊ ဇူလိုင်လတွင် အဘ ဦးဘကြွယ်၊ အမိ ဒေါ်အေးငြိမ်းတို့မှ မန္တလေးမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ ကို ၁၉၇၅-ခုနှစ် တွင် စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် မှ၎င်း၊ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးပါရဂူဘွဲ့ တို ...
ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင် ဇော်မျိုးသက် သည် ရက္ခိုင့်တပ်တော် ၏ ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သည်။ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အပတ်စဉ် သင်တန်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်နှင့်အတူ ရက္ခိုင့်တပ်တော် ကို ဦးဆောင်ကာ ရခိုင်အမျိုးသားများ ရသင့်ရထိုက်သောအခွင့်အရေး၊ အ ...
ညိုဝင်း သည် ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ နှင့် တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေတစ်သက်တာဆုကို ဆရာကြီး မောင်သာနိုး၊ ဆရာကြီး သိန်းသန်းထွန်း)နှင့်အတူ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။
ပန်းချီ မောင်ညိုဝင်း ကို ၁၉၄၂-ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းမောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်ရှိသည်။ ဖခင်သည် ၁၉၅၀-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွေ့ကာ ပန်းချီလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကာ မိသားစုကို မန္တလေးတွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၂-ခုတွင် မိသားစုအ ...
ဦးညီညီထွေး သည် မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ဦးညီပု သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ရှေ့နေနှင့် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် လက်ရှိတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ တတိယမြောက် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသည်။ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဂွမြို့နယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့ကာ မတ်လ ...
ဒေါက်တာ ညီမင်းဟန် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် အောင်မြေသာစံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။
ညီလင်းဆက် မှာ အမည်ရင်း ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ ၁၉၉၇-ခုနှစ်တွင် ဒဿမတန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် နှင့် ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံများတွင် တက်ရောက် ပညာသင်ခဲ့ဖူးသည်။ မြန်မာ blog ခေတ်ဦးတွင် စတင်ပါဝင်ခဲ့သော မြန်မာ blogger တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ...
ဒေါက်တာ ညွန့်ဖေ သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အာဏာသိမ်းမှုတွင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ ခန့်အပ်ထားသော ပညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်သည်။ ယခင်က ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ထိုတက္ကသိုလ်တွင် ငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းများကြောင့် န ...
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီများရှင် ညွန့်ဝင်း ကို အဖ အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်းတင်မောင်၊ အမိ ဒေါ်သိန်းညွန့်တို့က ၁၉၄၁ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် သထုံမြို့၊ ဇွဲကလာရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၇ ဦးအနက် အကြီးဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ကလေးဘဝ၌ မန္တလေးအမျိုးသားကျေ ...
ဦးဌေးငွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မြောင်မြို့နယ် ကိုယ်စားပြု၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဦးဌေးမောင် သည် တိုက်ပွဲခေါ်သံ၊ အရေးတော်ပုံ စသောစာအုပ်များကိုရေးသားခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်က ချီးမြှင့်သော အမျိုးသား စာပေဆု ရရှိခဲ့သူ စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဦးဌေးအောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား တပ်မတော် အရာရှိဟောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလတွင် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ယင်းမတိုင်မီက ၂၀၁၁ မတ်လမှ စတင်ကာ ဒုတိယဝန်ကြီးအ ...
ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင် သည် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်တွင် ပါဝင်ခဲ့သူ တပ်မတော်သားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်တစ်သက်တာ ထူးချွန်ဆုရ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ဂီတစာဆို၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား စာပေဆုရ စာရေးဆရာတစ်ဦး လည်း ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ့တာဝန် ...
တင်ကွတ် သည် လက်ရှိတွင် အက်ပဲကုမ္ပဏီ ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် အက်ပဲကုမ္ပဏီကို စတင်အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အက်ပဲကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ စတိဗ်ဂျော့စ် ထံမှ အမှုဆောင်အ ...
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာတင်စိုး သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာနှင့် အငြိမ်းစား ဘောဂဗေဒ ပါမောက္ခ ဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ကလောင်အမည်ခွဲများမှာ တင်စိုး ၊ တက္ကသိုလ် တောသား၊ တက္ကသိုလ် မောင်လူငယ် ဖြစ်သည်။
တင်ဇာမော် သည် မြန်မာ အမျိုးသမီး အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် စီးပွားရေးအရအအောင်မြင်ဆုံး မြန်မာအမျိုးသမီးအဆိုတော်များထဲတွင် တစ်ဦး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ တင်ဇာမော်သည် Myanmar Idol တွင် ဒိုင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ တင်ဇာမော်သည် American Idol ၏ မြ ...
တင်တင်မြသည် နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ တင်တင်မြ၏ အသံသည် တစ်မူထူးခြားသည်။ မြန်မာအသံတွင် အမှု့ထမ်းခဲ့သည်။ တင်တင်မြသည်" တစ်ကျော့နှစ်ကျော့ တေးကိုသီ” ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားတွင် ဝင်းဦး၊ ချိုပြုံး တို့နှင့်တွဲဘက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တင်တင်မြ၏ ခင်ပွန်းမှာ ...
ဦးတင်ထွန်းနိုင်သည် ရန်ကုန်တိုင်း ဆိပ်ကြီး ခနောင်တို မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ရွေးကောက်ခံ အမတ်ဖြစ်သည်။ မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံမြို့နယ် ဆီမီးခုံ ရွာ၌ ၁၉၇၁ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်တွင် မွေးဖွားသည်။ မန္တလေးစက်မှုတက္ကသ ...
ဦးတင်မောင်ထွန်း ၂၀နိုဝင်ဘာ၁၉၃၁ မွေးဖွားသည်။ မြန်မာခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးသည် ၁၉၆၇မှ စတင်ပြီး ဟေဗြုန်ညီအစ်ကိုများအသင်းတော်၏ သင်းအုပ်ဖြစ်ပြိး အမှုဆောင်ခဲ့မှုများကြောင့် ၁၉၉၈ခုနှစ်တွင် International Biography Centre, Cambridge မှ ပါရဂူဘွဲ့ ခ ...
တင်မ် ဘာနာလီ ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး World Wide Web ကို တီထွင်ခဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို တီထွင်ပေးရန် ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရသည်။ HTTP စနစ်ကို ပထမဦးဆုံး အောင်မြင်စွာ တီထွ ...
ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက် ကနေ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ ပထမ အကြိမ် အဖြစ် ထုတ်ဝေ ခဲ့တဲ့ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန စာတည်း အဖွဲ့က စုဆောင်း ပြုစုတဲ့ နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း စာအုပ်က "တက္ကသိုလ် တင်မြင့် အကြောင်း ...
ဦးတင်လွင် သည် မြန်မာစာအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဦးတင်လွင်ကို ၁၉၂၈-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်တွင် အဖ ဦးအောင်သိန်း၊ အမိ ဒေါ်စိန်းတို့မှ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၄၀-ခုနှစ်တွင် အလယ်တန်းပညာကို ရန်ကုန်ဟိုက်စကူးကျောင်း၊ ၁၉၄၄- အထက်တန်းပညာကို နိ ...
ဒေါက်တာတင်လှိုင် ကို ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ အရာတော်မြို့နယ် သခွတ်ပင်လည်ရွာတွင် ဖွားမြင်သည်။ ရွာမြောက်ကျောင်း ခေါ် ဆရာတော် ဦးခန္တီ၏ ရွှေသိမ်တော် တိုက်တွင် ပညာစတင် သင်ကြားသည်။ ၁၉၅၁ မှ ၅၈ ထိ မန္တလေး ဒိုင်အိုစီဇင် သံတဲ ...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ တပ်မတော် ၏ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
တင်အောင်စိုး သည် မြန်မာ အမျိုးသား စာရေးဆရာနှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့၌မွေးဖွားသည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် စာပေလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် အယ်ဒီတာအာဖြစ် ၆ နှစ်မျှထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ...
သီဟသူရ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး အမည် သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး မွေးသက္ကရာဇ် ၂၉. ၅. ၁၉၅ဝ ဇနီးအမည် ဒေါ်ခင်စောနှင်း သွေးရင်း သားဖြစ်သူ နိုင်လင်းဦး ခေါ် တေဇာစောဦး ဗိုလ်ကြီးဟောင်း၊ ဧရာဟင်္သာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် လူမျိုး/ဘာသာ ဗမာ/ဗုဒ္ဓ ပညာအရည်အချင်း စစ်တက္ကသိုလ် သိပ္ ...
ဦးတင်အေး သည် အငြိမ်းစား ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တံတားဦးမြို့နယ်မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေ ...
သူရဦးတင်ဦး သည် အငြိမ်းစား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင်၊ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူများတွင် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်ကာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ၃ ဒီဇင်ဘာ ...
တင်းနင် သည် ၁၉၉၀-ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀-ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် တရုတ်အမျိုးသမီး စားပွဲတင်တင်းနစ် ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၂၀၁၁-ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စားပွဲတင်တင်းနစ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ချင်းပြိုင်ပွဲ၌ ရွှေတံဆိပ် ပထမဆုံးအကြိမ် ရရှိခဲ့ ...
တတ္စုယ ဖူဂျီဝရ သည် ဂျပန်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Battle Royale ရုပ်ရှင်၌ ရှုယ နနဟရအဖြစ်၊ Death Note ကား၌ လိုက်တိုယဂမိအဖြစ်၊ Kaiji ကား၌ ကိုင်ဂျိအဖြစ်၊ ဟိဒဲအို နခတ၏ The Incite Mill ၌ ရိခုဟိကို ယုကိအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာကျော်လေသည်။ ၂၀၁၄ ...
တဝန် ဝိဟောကရတန ခေါ် Tay သည် ထိုင်း မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်၊ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ စုဠာလင်္ကရဏတက္ကသိုလ်ထွက် တဝန်သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် Bang Channel ၏ Five Live Fresh အစီအစဉ်တွင် တင်ဆက်သူအဖြစ် ပထမဆုံး ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ထဲမှာပင် Room Alone 401-410 ဇ ...
တာကဲမိဆု တာကိဇာကိ သည် ဂျပန် စီးပွားရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အော်တိုမေးရှင်းဆိုင်ရာ အာရုံခံ ကိရိယာများ၊ စက်အမြင်အာရုံစနစ်များ၊ ဘားကုဒ်ဖတ်စက်များ၊ လေဆာရိုက်နှိပ်စက်များ၊ အတိုင်းအတာ ကိရိယာများနှင့် မိုက်ခရိုစကုပ်များ ထုတ်လုပ်သော ကုမ္ပဏ ...
တာဒါရှီ ရာနိုက်အိ သည် ဂျပန်လူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Uniqlo လက်အောက်ခံဖြစ်သော Fast Retailing ၏ တည်ထောင်သူ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သည်။ သူ့ကို အစဉ်အလာအရ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အချမ်းသာဆုံးများထဲမှ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Forbes သတ်မှတ ...
တိုနီဂျ ဟု နိုင်ငံတကာတွင် လူသိများသော သက်ချခွန် ရီရမ်း သည် ၁၉၇၆ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားပြီး ထိုင်းရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ သိုင်းဆရာ၊ အက်ရှင်အကွက်ထွင်သူ၊ စတန့်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ၏ နာမည်ကြော်ရုပ်ရှင် ...
ဒေါက်တာ တိုနီတန်း မှာ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၏ သတ္တမမြောက် သမ္မတဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ စင်ကာပူသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အာဏာရ ပီအေပီပါတီဝင်ဖြစ်ပြီး ယခင်က ဘဏ္ဍာရေး၊ ကာကွယ်ရေး၊ ပညာရေးတို့အတွက် ဝန်ကြီး၊ လုံခြုံရေးန ...
တိုးနိုင်မန်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူမှာ စစ်ဖက်အရာရှိဟောင်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းဖြစ်သည်။
ဦးတီခွန်မြတ် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား၊ ကချင်လူမျိုး နိုင်ငံရေးသမား၊ ရှေ့နေနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ...
တီမို ဝါနာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ချဲလ်ဆီးနှင့်ဂျာမနီအသင်းအတွက် တိုက်စစ်မှူးအဖြစ်ကစားသော ဂျာမန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမား ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သူ၏ပွဲဦးထွက်တွင် တီမို ဗာနာသည် VfB စတူးဂါဒ် ကိုကိုယ်စားပြုသည့်အငယ်ဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ...
တူဒေါင်း အမ်ဒို သည် ဂျပန်လူမျိုး အာခီတက် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ Architectural historian Francesco Dal Co ကိုမှီငြမ်းကာ Architecture နှင့် Landscape ပညာရပ်ကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူခဲ့သော အာခီတက်တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဒီဇိုင်းများသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေး ...
ဦးတေဇ သည် စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည်ဟု လူသိများသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဖြစ်သည်။ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ထူးအုပ်စု ကုမ္ပဏီနှင့် အဲပုဂံ လေကြောင်းလိုင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် မှ ရှမ်းကြီးမြင့်ဆွေဟု လူသိများသည့် သူရဲကော ...
တေလာဆွစ်ဖ် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသား တေးရေး၊တေးဆို တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည်ငယ်စဉ်က Wyomissing, Pennsylvania တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး အသက် ဆယ့်လေးနှစ်အရွယ်တွင် ကျေးလက်ဂီတ လောကသို့ဝင်ရောက်ရန် Tennesseeပြည်နယ် Nashvilleမြို့ သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Big ...